ईश्वर सिर्जनाको कला [ती दिनहरु] – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
ईश्वर सिर्जनाको कला [ती दिनहरु]
२०७७ पुष ११, शनिबार १२:०४ गते
‘ईश्वरले मान्छे बनायो कि मान्छेले ईश्वर ?’ भन्ने प्रश्नले मेरो वैचारिक धरातल सधैँ क्रियाशील भइरह्यो । सतहमा उभिएर सोच गर्दा यो प्रसङ्ग असाध्यै हलुकाजस्तो लागेता पनि विषय धेरै गम्भीर छ, किनभने कल्पना नै संसार हो र कल्पनाले बुनेको संसार हामी बाँचेको संसारभन्दा धेरै सुन्दर छ । मान्छे कल्पनाले जीवित रहन्छ, सुखी हुन्छ र कल्पना सकिएको दिन धिपिक्क निभेको दीपकले भैmँ जीवनको तेल सिध्याउँछ ।
कति अद्भुत छ, जीवनयात्रा ! मेरो घरअगाडिबाट सडकछेउ हुँदै बुद्धिमान् कुमाल नाम गरेको युवा बिहानबिहानै मदिराले बेहोस भई ढल्पलिँदै र हल्लिँदै हिँडेको देखिन्छ । मेरो घरको उत्तरतर्फ तीन सय मिटरको दूरीमा मन्दिर छ । त्यहाँ शङ्ख—घण्ट र थरीथरीका भजन, गीत—सङ्गीत गुञ्जिएका हुन्छन् ।
ईश्वरीय नाम उच्चारण र त्यसले सिर्जिएको धुन तरङ्गले ओछ्यानमै बिउँझिएकाहरु पनि मौन आनन्दमा मस्त भएका हुन्छन् होला । त्यही समय र मौका मिलाई यतातिर बुद्धिमान् कुमाल ढल्पलिंँदै छ । उसको निम्ति ऊ आनन्दले जागृत भएको छ, मानौँ जीवन—नृत्यमा मग्न भएको छ, ऊ ।
सडकछेउ उभिएको मेरो घर छ र म सडकछेउको घरभित्रबाट अवसर मिलेका घडी सडकका यावत् दृश्यहरु हेरिरहेको हुन्छु । गजबको प्रश्न उभिन्छ अनि मेरो मथिङ्गलमा ‘मैले सडकतिर हेरिरहेको छु कि सडकले म भएतिर हेरिरहेको छ ?’ भन्ने भाव उब्जिन्छ । सायद, हामी दुवैले दुवैतिर हेरिरहेका होऔँला । आफैँ उत्तर दिई टोपलिन्छु । मभित्र मनमौजी उत्रिएको प्रश्न र मनमौजीकै मेरो उत्तरसँग कसैको बिरोध, दाबी, समर्थन र आलोचना केही हुँदैन । म दङ्ग पर्छु !
मेरो विचारमा ‘जीवन’ एउटा सम्भावना हो ।’ ‘सम्भावना’ शब्द आफैँमा अर्को अद्भुत विषय छ । सम्भावनाले वर्तमानमा उभिएको मान्छेलाई जुनसुकै भविष्यतर्फ निम्त्याउन सक्दछ । भविष्यतर्फको यात्रा अज्ञात छ र ’सम्भावना’ यसको साथ छ । सम्भावनाले सुन्दर भविष्य घटित गराउनुपर्छ । सुन्दर भविष्यको निम्ति मान्छेको हृदयको अन्तस्भित्र सुन्दर सङ्गीत सृजना गर्दछ । सुन्दर सङ्गीतको चाह ‘ईश्वर’को सृष्टि हो । आँखा भएकाहरु संसारको रङ्ग देख्दछन् । जो आँखा देख्दैनन् उनीहरु जानून्, संसारको रङ्ग कस्तो हुन्छ ? तर, अवश्य उनीहरुको पनि संसार छ अनि संसारको चित्र छ र आफ्नै किसिमको रङ्ग पनि ।
कहिलेकाहीँ मेरो मगजले विभिन्न उट्पट्याङे चित्रहरु कोर्दछ । म हरेक चित्रहरुलाई मनग्य ठाउँ दिन्छु । निर्धक्क ती चित्रहरु हेर्दछु र मनन गर्दछु । संसार हो यो । यहाँ थुप्रैथुप्रै चित्रहरु छन् र ती विचित्रका छन् ।
प्रश्न स्वाभाविक आउँछ— ‘आँखाले रङ्ग देख्यो कि रङ्गले आँखा ? ‘दुवैले दुवैलाई देखे होलान् । उत्तर सजिलै दिइहाल्छु ।
अवश्य पनि ईश्वर मानवजन्य कृत्य हो । म निर्धक्क भन्न सक्छु । सडकमा हिँड्दै गरेको बुद्धिमान् कुमाल र मेरो घरछेवैको मन्दिरमा ईश्वर प्रार्थना गर्दै रमाउने मान्छे, यी दुवै जना आफ्नै निजी कृत्यहरु हुन् । सँगै अर्को प्रश्न पनि जोड्न कुनै अप्ठेरो मान्दिनँ म– ‘मलाई मेरी आमाले जन्माउनुभयो कि हजुरआमाले मेरी आमालाई ?’ कुरो उस्ताउस्तै भए पनि चुरो फरक छ । हजुरआमाकी पनि आमा छिन् र उनकी पनि आमा अनि हजुरआमा छिन् । अनन्त छ, विषय । यही अनन्तभित्रको खोजीले ईश्वरको रचना गर्दछ ।
औपचारिक घोंषणा गरेर ‘धर्म’ नमान्ने देशहरु छन् । धर्म नमान्नुमा गौरवबोध गर्छन् रे उनीहरु । हामीकहाँ पनि तिनीहरुको देखासिकी गरेर धर्म नमान्नेहरु पैदा भए भन्ने सुन्नमा आउँछ । म सुन्छु मात्रै । तर, धर्म नमान्नेहरुको न कुनै देश देखेको छु, न कुनै मान्छे । गजबको छ, यो पृथ्वी र गजब छन् यसले जन्माएका मान्छेहरु । मान्छेहरु कहाँको दुई खुट्टा र दुईवटा हातले मात्रै बनेका हुन्छन र !
यी त मगजले बनेका विचित्रका तस्बिरहरु हुन् । मगजको चरित्रअनुसार अमिवाभैmँ हरेक आकारमा सल्बलाउँछन् । आफ्नै आकार र मापनलाई किटान गर्न नसकेकाहरु एकअर्काको मापन गर्न तम्सिन्छन् ।
तब त संसारको सक्कली अनुहारलाई अनुभूत गर्न ‘ईश्वर’को सिर्जना गर्दछ मान्छे । धर्म नमान्ने भनिएको देशको राष्ट्रपति सत्य र अविचलित निष्ठाले जनताको हित र प्रगतिमा निरन्तर रहन शपथ खाँदै गरेको देख्छु । धर्म नमान्ने मेरो देशको आधुनिक मान्छे पनि उसकै अनुसरण गर्दैछ । मभित्र सजिलै एउटा प्रतिक्रिया पैदा हुन्छ, ‘यही हो धर्म’ ।
धर्म ईश्वरसम्म पुग्ने कुनै मार्ग हो या होइन, यसबारे मेरो कुनै टिप्पणी त छैन तर ‘ईश्वर’को रचना अवश्य दुनियाँको ईश्वरीय मार्गको उज्यालो हो । पृथ्वी, सूर्य र सकल विश्वब्रह्माण्ड आफैँ ईश्वरको इशारा स्वीकार गरिरहेका छन् । सागर भेट्न फाल हान्दै हतारिएका कुला—कुलेसा र नदीखोला अनन्तको साथ र आकर्षणमा सृष्टिको आरम्भदेखि नै सङ्गठित भइरहेछन् । आगोको सानो झिल्को पनि सूर्यतर्फ लम्किरहेकै छ । धर्मको न्यायालयमा प्रत्येक कीटपतङ्गदेखि सारा जलचर, थलचर, प्राणीहरु र मान्छेसमेत ‘ज्यू—हजुर’ गरिरहेका छन् । घोषणाले मान्छे ‘ईश्वर—प्रार्थना’ स्वीकार गरोस् अथवा नगरोस् तर ऊ ईश्वर—पथमा अडिग छ, अठोट र प्रतिबद्ध छ ।
म धेरै मन्दिरहरुमा उभिएको छु । मस्जिद र गिर्जाघरहरुमा पुगेको छु । धेरै प्रार्थनाहरु सुनेको छु र प्रार्थनाभित्र नुहाउँदै गरेका सयौँ मान्छे र तिनको भरोसालाई छामेको छु । ती प्रत्येक नुहाउँदै छन्, यसमा मेरो कुनै नकारात्मक सोच छैन । तर, सबैको मैलो गइहाल्छ भन्ने नहुँदो रहेछ । नुहाउँदा नुहाउँदै पनि कोही कोही त झनै फोहोरी देखिँदा रहेछन्, तर शरीर र मनको मैलो हटाउने बिधि एउटै हो । ऊ ईश्वरको रचना गर्दछ र उनकै रचनामा बग्दो गङ्गा स्नान गर्दछ ।
धेरै चमत्कार पनि मेरा आँखाहरुले देखेको छु । ईश्वर निन्दा गर्ने र उनको आलोचनामा मस्ती मनाउनेहरु कतिपय झन् धेरै ईश्वरको समीपमा छन् । व्यवहार र विचारमा ती पवित्र छन् । कुनै मन्दिर, मस्जिद र गिर्जाघर तिनले चाहारेका छैनन् । बस्, कर्तव्य—पथमा अडिग र अविचलित छन्, सुखी छन् र सबैका प्रिय छन् । मैले कहिल्यै उनलाई नास्तिक देखिनँ र अनिश्वरवादी प्लटमा दर्ज गरिनँ । ती पूर्वजन्मको कमाइमा सुख भोग गर्दैछन् भन्ने ठान्दछु ।
मान्छेको जम्माजम्मी औपचारिक आयु एक सय वर्ष निर्धारण गरिएको छ । बिरलै मान्छेहरु सय वर्षभन्दा पनि बढी संसारमा टहलिन पाउँछन् । संसार जान्दछन्, बुझ्दछन् र अज्ञात यात्राको बाटो पक्रिनै पर्छ तिनले पनि । एकदिन ती अवश्य सबै बिदाबादी हुन्छन् ।
म २०७७ सालको मंसिर १३ गतेबाट ५७औँ वर्षको यात्रामा निक्लिएको छु । अतीतका हरेक हिउँद—वसन्त र वर्षहरुमा मेरो जीवनको भोगाइ विचित्रको छ । ती एकैनास पटक्कै छैनन् । पैतालाहरुले स्पर्श गर्दै रहेका प्रत्येक यात्राका डोबहरु बिलकुल भिन्न छन्, अजीब छन् र अविस्मरणीय छन् । म्यान्मा देशको जङ्गली गाउँमा जन्मिएको शरीरले मेरो मनस्थितिलाई अनुभूत गर्न सक्ने बनाएको दिनदेखि जीवनका हरएक घटना र परिघटना व्यहोरेको छु, जो अद्भुत छन्, स्मरण गर्दछु ।
आर्थिक व्यवधानले ल्याएका सयौँ पीडा र कष्टहरु स्मृतिमा आउँछन् । टर्रो भाषा बोल्नुपर्दा ‘आर्थिक—क्रियाकलाप’ नै जीवन भोगाइ हो कि भन्ने पनि लाग्छ । मान्छे बिनाकाम बस्नुहुँदैन । आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न भइरहनुपर्छ । जुन समयमा आर्थिक पीडाले मान्छे अत्तालिएको हुन्छ, त्यही समय मात्रै भविष्यको गर्भमा अनन्त सुखको स्मृति बन्दो रहेछ । अरु सबै सामान्य ।
खासमा मान्छेको जाँचको कसी नै आर्थिक विपन्नता रहेछ । विपन्नतालाई मान्छेले कसरी हल गर्न सक्दछ ? उसभित्रको धैर्य र निरन्तरको प्रयास कसरी गुज्रन्छ ? भन्ने विषय अहम् हुँदो होला जस्तो लाग्छ ।
विपन्नता र दरिद्रता नितान्त जीवन भोगाइका दुई फरक किनाराहरु हुन् । धनले भरपूर र सम्पन्न धेरै मान्छेहरु पनि दरिद्रताको पासोमा जकडिएकै देखेँ मैले । ती असाध्यै दुःखी छन् र निजी व्यवस्थापनको आफ्नै अनिकालमा प्याकप्याकी जीवन निर्वाह गर्दैछन् । वर्तमान संसारमा समृद्धिको दौडमा प्रथम घोषित गरिएका बिल गेट्सको जीवनी पढ्दै गर्दा उनीसमेत सुखको खोजीमा भौँतारिएका देखिन्छन्, तर उनको सुख उल्टो छ । पाउरोटी पर्खंदै लाइनमा उभिएकाहरुसँग पाउरोटीको प्रतीक्षा गर्न आफू पनि उभिन पाउँदा सुख महसुस गर्दा रहेछन् । सस्तो जुत्ता र सामान्य पहिरन उनको मनपसन्द रोजाइमा पर्दा रहेछन् । यी सबै प्रक्रियाहरुले दरिद्रता उन्मूलनमा निश्चित प्रोसेस पूरा गर्दछन् र मान्छे सुखी हुन मार्ग प्रशस्त गर्दछन् ।
‘बिल गेट्स’ धनाढ्य छन्, तर उनी धनको दास हुन चाहँदैनन् । उनलाई धनबाट मुक्ति चाहिएको छ र बदलामा सुख । ‘बिल गेट्स’ जीवनको एउटा चरण हो । थोरै मात्र पनि सत्पथको झिल्को पर्न गयो भने यसैबाट बुद्धको जन्म हुन्छ । दरिद्रताले कहिल्यै बुद्ध जन्माउन सक्दो रहेनछ । मनले अभावरहित हुनुपर्दो रहेछ मान्छे बुद्धमा परिणत हुनका लागि । स्मरणीय छ, तर बुद्धले अनगिन्ती सांसारिक अप्ठेराहरुसँग जुध्नै पर्दोरहेछ ।
मैले अर्थका दृष्टिकोणले धेरै विपन्नहरुलाई असाध्यै सुखी देखेको छु । उनीहरुभित्रको सुखलाई तलास गर्न धेरै प्रयास गरेको छु । उनीहरु अनुहारले भन्दा हृदयले यति धेरै सुखी छन् कि मापन नै गर्न नसकिने अथाह सुखमा मस्त छन् ।
म पूर्वजन्ममा विश्वास गर्दछु । मेरो विचारमा व्यक्तिले कयौँ जीवन—चक्र पूरा गर्दै रहँदा त्यससमय सञ्चय गरेको ज्ञान, विवेक र सत्कर्महरु वर्तमानमा स्वचालित उपयोग हुन लाग्दछन् । परिणामतः आर्थिक विपन्नतामै पनि मान्छे सुखको अब्बल अवस्थामा राज गर्दछ । सिरानमा थुप्रिएको धन धेरैलाई कष्ट दिने वस्तु भएको देखेको छु । धनको नाममा सुखको साथमा नभएका र पक्षी सञ्चयका पर्याय कयौँ मान्छेहरु मेरानिम्ति सुख तलास गर्न निश्चित लक्ष्यका देवताहरु हुन् । कसरी यस्तो भिन्नता हुन्छ मान्छेको जीवनचर्यामा भन्ने मेरो अहम् जिज्ञासा हो ।
‘कल्पनाले सुन्दर संसारको सिर्जना मात्र गर्दैन । कल्पना विषाक्त जीवनचर्याको कारण पनि हो । मसँग भएको धन सकिएको दिन मेरो अवस्था कस्तो होला ? मभन्दा धनार्जनमा ऊ अगाडि पुगे मेरो प्रतिष्ठा कसरी जोगिएला ?
यस्तै भ्रम र ईष्र्यामा मान्छेले निष्पट्ट अन्धकार व्यहोरेको छ । ठूलो प्रतिशतका गुरूपुरोहितले पनि शब्दमा सुख र अनन्तका कुरा गर्न सक्छन् तर यथार्थ बिलकुल भिन्न देखेको छु । तिनको हृदयमा पीडाको डढेलो सल्किएको हुन्छ । सुखको आवरण त देखिन्छ तर अदृश्य रोदनमा सम्पूर्ण जीवनको भोगाइ पूरा गर्दछन् ।
म जीवनको खोजीमा छु । कर्मको सुन्दर साधनामा ईश्वरको उपस्थिति देख्छु । यस स्तम्भको प्रारम्भमै भनेको छु– ‘मान्छेले ईश्वर सिर्जना गर्दछ ।’ यस ब्रह्माण्डका जति मान्छे छन्, जब तिनले ईश्वर सिर्जना गर्ने कला सिके तब त्यस कलाले नै तिनलाई सुखको द्वारसम्म पुग्न सहयोग गरेको मैले अनुभूत गरेँ ।